Version 0.6.1 – Buddypress-dhexgalka qoto dheer
August 2, 2010 by dalabyo 8 Comments
Buddypress, doonayaa in aan noqdo saaxiibada?
Version Tani waxay leedahay isku dhafka ah ee cusub iyo laba qof oo ah Kumandoska kutaan, ehelkiisii ​​oo dhan, ugu xusid mudan waa sii dheer ee taageerada buddypress taas oo bilaabaya in taageero loogu talagalay il waxqabad ee luqadaha kala duwan. Taas macnaheedu waxa weeye in marka user a comments on post a iyadoo la isticmaalayo version kala duwan oo ka mid asalka – il ay hawshu si fiican loo turjumay doona (siin aad dhigay turjumi Luqadda). Guddigu waxa ay sidoo kale muujin doontaa turjumida by logged in dadka isticmaala. Waxaan hadda kale oo ay leeyihiin koox for the users plugins on site buddypress at the http://buddypress.org/community/groups/transposh-translation-filter-for-wordpress sidaas darteed haddii labada waxaad isticmaali una jecel, aad leedahay meesha si ay u muujiyaan jacaylka this, haddii aad u neceb yihiin iyo tagto halkaas waxaad yeelan doontaa in qaamuusyada.
Muuqaal kale oo kaas oo aanu ku daray in ay mahad Yoav ee bandhigga waa taageero loogu talagalay mawaadiicda RTL taas oo dhab ahaantii ay leeyihiin taageero RTL dhisay (sida labaatan toban, iyo mawduuca buddypress default ah). Your Cibraaniga, Carabi, Get, Urdu iyo users Yadhish noqon doonaa faraxsan si ay u dhigi doontaa nabad dunida sidaas oo degdeg loo joojiyo samaynta Muuse Biixi Cabdi iyo gefiltes.
Ciidamada Kumandoska kale waxaa ka mid
Fix for ms turjumi iyo characters Laatiin aan ahayn (ooops)
Fix qorno umada bahawdey iyo arrinta turjumaad url marka la isticmaalayo qaab-dhismeedka caadadii (tusaale. marka ay la. html suffixed) (mahad Claudio)
Turjumaad Auto ma shaqayn doonaa in hab edit haddii turjumaad auto lagu wadaa in off (Oops kale)
Rajaynaynaa inaad si hagaagsan doontaa sii deynta this sida ugu badan ee aanu qaban.
Filed Under: Shaaciyaan Release Tagged Iyadoo: Bing (msn) turjumaan, buddypress, yaryar, sii daayo, plugin wordpress
Ma waxaa macquul ah in lagu daro xulashada ee curyaamo hawlaha turjumidda la tusay in il waxqabadka? In website a af badan, this clogs ilaa durdurka ku arrin badan, iyo dadka isticmaala ma arki kartaa alaabta kale ee socda…
Thanks badan oo!
Malahayga ahaa in lagu sifeeyo kartaa, halkaas ma ahan hawl badan oo noocan ah, kaliya marka turjumaan aadanaha oo la gasho tarjumayaa. Laakiin ok, Waxaan kuugu dari doonaa fursad u versions soo socda
i heli daalay oo la xusuusta marka isku day in ay curiyaan Khariidadda bogga la google Khariidadda bogga plugin (aad muhiimka ah Khariidadda bogga modified). Waxaan oga sababta oo ah my blog uu leeyahay 1,959 posts, iyo 12 turjumaad languange firfircoonaan.
Ma jiraan wax fikrad ah oo aad u kala jabeen aan Khariidadda bogga galay 3-5 qayb?
eegin ugu wanaagsan,
Waxaan sameeyey mashruuc loogu colnect.com on sitemaps ah, halkaas oo aan ahbaa Khariidadda bogga halkii luqadda iyo ~ 3 million URLs file index ah. No waxaa daaqa xasuusta, Si kastaba ha ahaatee fulinta this on Khariidadda bogga plugin google waa aan caadi, iyo qoraaga diiday sharooto aan la soo dhaafay (1 dalaka…) si dayactirka tani waxay noqon lahayd mid aad u badan oo gumaarka ah siiyey mudnaanta haatan. Waa qaab aad sidoo kale code ama qoraaga plugin asalka ah weydiisan kartaa in ay fuliso.
Waxaad ka arki kartaa waardiyaha asalka halkan:
Waan ka xumahay waxaa jira in yar oo aan samayn karaa waayo, haatan
Turkish dhibaatada Ingiriisi turjumi. There are Turkish characters problem 🙁
U,saddex,dhibaatada characters Ö
Dhibaatada go'an on svn ah, aad u baahan tahay si ay u soo dejisan iyo badalo faylasha .js isticmaalo. Waa la hagaajin doona in yar socda 0.6.2 sii daayo (labadoo maalmood)
Ka hor inta aadan u kor, waad ku dari karaysaa feature u nadiif ah / madhan database ee khasnado?
maxaa yeelay, waan ka badan 20mb u shaxdan, oo waxaa jira laba miis ka. CMIIW
Plugin Transposh waxaan isku dayay markii ugu horeysay waxaan ku rakiban oo cusub